आचार्य श्रीनिवास काठमाडौबाट पक्राउ, आफैंले गोली हान्न लगाएको आरोप
काठमाडौं । धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवास गोलीकाण्डमा आचार्य स्वयमले गोली हान्न लगाएको खुलेको छ । आफैं गोली चलाउन लगाउने श्रीनिवासलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । उपचारका लागि दिल्ली जान लागेका उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर विराटनगर लगिएको प्रहरीले बताएको छ । २५ चैत बिहान १ बजे मोरङको
साउदी अरब छिर्दा पैसा कमाउने मात्रै सपना बुनेका इन्द्रावती गाउँपालिका–४, नवलपुरका क्षेत्रबहादुर तामाङको सोच २६ महिना खाडीको उखरमाउलो गर्मी खाएपछि एकाएक बदलियो । खाडीको आयातीत माटोमा भएको कृषि फार्ममा काम गर्दागर्दै उनले सोचेछन्– हावा, पानी र माटो सबै उपयुक्त भएको आफ्नो ठाउँ छाडेर यहाँ काम गर्नु उचित
राँची । भारतको झारखण्डमा एक १६ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कारपछि जिउँदै जलाइएको छ । ती किशोरीमाथि बलात्कार भएपछि अभिभावकले गाउँका अगुवालाई गुनासो गरेको भन्दै उनलाई जिउँदै जलाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार बलत्कारपछि गाउँका
खीतखीत गर्दै खीत्का छाडेर, अट्टाहसका साथ, या मनमनै, कोही मुसक्क अनि कोही फुसुक्क, के होला सोच्नुस त ? आज हामी हाँसोको कुरा गर्दै छौं । अलिक दार्शनिक कोणवाट हाँसोलाई पस्कन मन लाग्यो, विश्वको सबैभन्दा महँगो कुरा हाँसो । यी हाँसोलाई किन्नका लागि हामीले सकल जीवन खर्च गर्दछौं, हाँसो अझ एउटा यस्तो महँगो गहना जसको
पोष्टर टाँस्नेमाथि थालियो कारवाही
काठमाडौँ । आफ्नो व्यवसाय तथा कार्यक्रमहररूको चारप्रसारका लागि जथाचभावी पोष्टर तथा पम्प्लेट टाँस्नेलाई अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई लक्षित गरेर यो अभियान थालिएको हो ।
आज नचलेका गाडीको रुट परमिट आजैबाट निलम्बन गर्छुः महानिर्देशक भट्टराई
काठमाडौं । सरकारले बन्द हड्तालको नाममा सवारी साधन नचलाउने यातायात समितिको रुट परमिट आजै निलम्बन
दुइ लाख ५० हजार घुससहित शाँखुका प्रमुख नापी अधिकृत अख्तियारको फन्दामा
काठमाडौं । नापी कार्यालय, शाँखुका प्रमुख नापी अधिकृत भागवत साहले साडे दुइ लाख घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटिएको टोलीले गोकर्णेश्चर नपा वडा नं २ स्थित नयाँपाटीमा रहेको ३६ रोपनी जग्गा कित्ता काँट गरिदिएवापत सेवाग्राहीसँग बिभिन्न बहाना बनाइ घुस मागेको भन्दै उनलाई पक्राउ
स्वास्थ्यकर्मीले गरे युवतीको बलात्कारपछि हत्या
काठमाडौं । अछाम कालेकाँडा गाउँपालिका– ९ भानाकोट की १८ वर्षिया उर्मिला टमटा (टंकी) को स्वास्थ्यकर्मीले नै बलत्कार गरेर हत्या गरेका आरोप उनका आफन्तले लगाएका छन् । मृतकका दाजुहरु लक्ष्मण र मदन टमाटाले बहिनीको हत्या स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी समेत रहेका तिलक बटलाले गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यस्तो छ नेपाल भ्रमण तालिका
जनकपुर । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हेलिकप्टरमा भारतबाट सिधै जनकपुर आउने कार्यक्रम तय भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बैशाख २८ गते मोदी सिधै जनकपुर अवतरण गर्ने पुष्टि गरे । भारतीय वायुसेनाको जहाजमा नयाँदिल्लीबाट पटना विमानस्थलमा अवतरण गर्ने मोदी र उनको टिम त्यहाँबाट तीनवटा हेलिकोप्टरमा
नेपालमा ‘मिनी जापान’
जापान भन्नेबित्तिकै हामी मिहिनेती र परिश्रमीको देश सम्झन्छौं । तर, जापानीको श्रम हेर्न जापान गइराख्नै पर्दैन । ललितपुरको लुभुमै भेटिन्छ, ‘मिनी जापान’ । औद्योगिक क्षेत्रजस्तो वातावरण छ त्यहाँ । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको परम्परागत व्यवसायलाई प्रविधिमा लैजानु हो । दक्ष जनशक्ति अर्को समस्या
खादामा देखिएको व्यवसायिक संभावना
हिजोआज राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि औपचारिक कार्यक्रममा खादा प्रयोग गर्न थालिएको छ । विवाहमा बेहुला–बेहुलीलाई खादा लगाइदिने चलन बस्दै गएको छ । यसलाई अझ यसरी भनौं– जन्मदेखि मृत्युसम्म खादा प्रयोग भइरहेको छ । हामी खादा लगाउँछौँ या लगाइदिन्छौँ तर यसमा भएको व्यावसायिक सम्भावनाबारे हामीलाई वास्तै
गुराँस टिप्नेलाई अब‘जंगलमै कारबाही’ !
काठमाडौँ । घुम्न आउने समूहले टिपेर लैजान थालेपछि गुराँसको राजधानी तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा जिल्ला वन कार्यालयले गुराँस टिप्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो क्षेत्रमा २८ प्रजातिको गुराँस फुलिरहेका छन् । कान्तिपुरका अनुसार फूल टिप्दा सौन्दर्य गुम्ने र हाँगा भाँच्दा अर्को वर्षसमेत असर पर्ने भन्दै वन
भूकम्पमा मरेर बाँचेका सुकरामको कथाः त्यो त्रासदी, त्यो चुम्बन !
सन्तोष अधिकारी/गोरखा, मध्य दिउँसोमा सुनसान थियो बारपाक । गाउँलेहरू आ–आफ्नै धन्दामा व्यस्त थिए। गाउँ आफ्नै लयमा थियो। यत्तिकैमा हल्लिन सुरु गर्‍यो भूईं । डुम्म डुम्म आवाज आइरहेको थियो । धूवाँ उडिरहेको थियो। जमिन भासिएजस्तो, आकाश खस्नै आँटे जस्तो। गाउँलेले खासै भेउ पाएनन्, के भइरहेको छ यो धर्तीमा ? एकएक
मै बनाउँछु मेरो धरहरा : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिचानसँग जोडिएको धरहरालाई गौरवको रूपमा आफैं बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । महाभूकम्प गएको तीन वर्ष पुगेको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहरामा पुगेर मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ नाम दिइएको कार्यक्रममा बोल्दै उक्त प्रतिवद्धता जनाएका
चक्रबहादुरको योगदान अतुलनीयः देउवा
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चक्रबहादुर ठकुरी पार्टीको एक निष्ठावान तथा इमान्दार कार्यकर्ता भएको बताएका छन् । उनको निधनले कांग्रेस पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उनले बताए । बुधवार काठमाडौंमा चक्रबहादुर ठकुरी प्रतिष्ठानद्वारा
इतिहास : कसरी बन्यो असन ?
काठमाडौँ । काठमाडौँको असन त्यस्तो बजार हो, जहाँ पूर्व फाट्ने बेलादेखि घाम नछिपिउन्जेलको फरक फरक समयमा फरक फरक बस्तुको व्यापार हुन्छ । साधारणतया असन हरेक दिन बिहान साढे ३ बजे बिउँझन्छ । यो बेलादेखि ८ बजेसम्म तरकारीको व्यापार हुन्छ । खर्पनमा तरकारी बोकेर व्यापारीहरु साँखु, ठिमी, नाला, भादगाँउ, किर्तिपुर,
भूकम्पपछिको तीन वर्षमा कति भयो काम ?
काठमाडौँ । नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, यो अवधिमा भएको पुनर्निर्माणको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । आखिर यो अवधिमा कति भयो त काम ? भूकम्पबाट झण्डै १० लाख निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । करिब साढे सात हजार विद्यालय, एक हजार दुई सय स्वास्थ्य संस्था र साढे सात सय सांस्कृतिक सम्पदामा
स्वेच्छिक अवकाश लिएका १३ सय कर्मचारीको पेन्सन पट्टा बन्दै
अमरवाणी संवाददाता /काठमाडौंँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश लिएका १३ सय कर्मचारीको पेन्सन पट्टा बन्दै गरेको बताएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले उक्त कुरा जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री पण्डितले अहिलेसम्म
निजामतीलाई बाहिरी कामको अनुमति
काठमाडौँ । सरकारले नै कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स दिँदा अधिकांश कर्मचारी बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने तथा सेयर खरिद बित्रक्रीमा समेत व्यस्त हुने क्रम बढेको छ । नियमित तलबबाहेक अतिरिक्त भत्ता र सुविधा सुविधामा मात्रै वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सक्ने कर्मचारीले अतिरिक्त काम
विमानस्थलमा ट्राफिक जामले आकाशमै घुम्छन् जहाज, आत्तिन्छन् यात्रु
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन २८ वर्ष पुरानो भयो । २० वर्षसम्म नेपालको हवाई यातायातको चाप थेग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, ०४७ मा भवन बनेपछि त्यसपछिका सरकार न यसको विकल्प खोज्नतिर लागे, न विमानस्थलको विस्तारमा गम्भीर भए । त्यसैले एउटा मात्रै धावनमार्गको भरमा
महिलामाथि एसिड हान्ने को हुन् ट्राफिक प्रहरी ?
चितवन । भरतपुरको त्रिचोकमा एक ट्राफिक प्रहरीले महिलामाथि एसिड हानेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीमा कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक रामचन्द्र खनियाँले कल्पना श्रेष्ठमाथि एसिड हानेका हुन् । श्रेष्ठको टाउको र अनुहारमा एसिड परेको छ । ५२ वर्षीय खनियाँ भरतपुर १२ का हुन् र तीन वर्षदेखि इप्रका टाँडीमा
धर्म परिवर्तन गराए देश निकाला !
काठमाडौँ ७ वैशाख । सरकारले धर्म परिवर्तन गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले कठोर नीति ल्याउन लागेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथि कडाइ गर्दै सरकारले धर्म परिवर्तन गराए देश निकाला गर्नेसम्मको कदम चाल्न सक्नेछ । विदेशी तथा गैरसरकारी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३२ लाखको सुन बरामद
काठमाडौँ ६ वैशाख । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३२ लाखको सुन बरामद भएको छ । बिहीबार बिहान फ्लाई दुबईबाट काठमाडौं आएका एक भारतीय नागरिकको साथबाट ३२ लाखको सुन बरामद भएको हो । विमानस्थल प्रहरी प्रमुख एसएसपी प्रेम चन्दका अनुसार सुन तस्करीमा गिरोह नै संलग्न हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
वृद्धभत्ता निर्णय खारेज गरे काँग्रेसले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं ६ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्ष पुगेकाहरूलाई वृद्धभत्ता दिनेबारे गरेको निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरे कडा विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै
काठमाडौँ ६ वैशाख । मुलुकभरका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सरकारले आज भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदैछ । एकवर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि र ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउन लागेको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । करीब ३८ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र
कीर्तेको अनेक रूपः विदेश जान सम्बन्ध विच्छेदको नाटक
काठमाडौँ ५ वैशाख । कीर्ते धन्दाका अनेक घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला अदालतको फैसला नै नक्कली बनाउन थालिएको खुलासा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले गरेको छ । समाचार अनुसार हुँदै नभएका न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका नक्कली फैसला बढ्न थालेपछि विदेशी मुलुकका अदालतले नेपालको अदालतलाई सोध्न थालेका छन् । अन्नपूर्णले
कर्मचारी सन्ततिको छात्रवृत्तिमा पौने अर्ब खर्च, उपलब्धि शून्य
काठमाडौँ ४ वैशाख । सरकारले कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्तिमा करोडौं लगानी गरे पनि उनीहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न नसकेको विषयलाई आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । समाचार अनुसार, सरकारी छात्रवृत्तिमा कर्मचारीका सन्तान डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि तथा वन प्राविधिक बनेका
आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदै
काठमाडौँ ३ वैशाख । जन्म दिने आमाप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै सोमबार आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदैछ । वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मिष्ठान्न, फलफूल, वस्त्र तथा आभूषण दिएर आमाप्रति आदरभाव गर्ने चलन छ । आमा नहुनेले मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरी दिवङ्गत आमाप्रति श्राद्ध तर्पण दान आदि गरेर आमाप्रति श्रद्धा व्यक्त